China SPC Floor 503 Ukwakha kanye Factory | I-Aolong
Incazelo: 1210 * 183 * 5mm
1. Kungcono ukhethe imikhiqizo enesisindo esingu-5mm noma ngaphezulu.
2. Uma uthenga online, kungcono ukusebenzisa imali ukuthenga ezinye (ucabanga ukuthi intengo ifanele) amasampula ukuze uqhathanise, ukubona ukuthi iphethini yokuthungwa iphansi kakhulu, bese ufaka wonke amasampula ebhokisini elivalekile ukuze ubone iliphi elinokunambitheka okuncane (i-vinyl chloride inephunga elifana ne-ether, abanye abantu bathi lifana nebhanana elibolile noma ama-slippers enjoloba?)
3. Bend kanzima. Uma impahla ye-PVC yinhle, kulula ukuyilulama futhi akulula ukuyisonga.
4. Thenga izingcezu eziningana ze-sandpaper ezinemininingwane ehlukile (i-600 mesh, i-300 mesh, i-180 mesh, lapho isibalo sincane, i-rougher it), bese uyipolishe esampuleni ukuze ubone ukuthi isiphi isampula esingamelana nokugqoka.
5. Bheka isitifiketi sokuhlolwa kwezinsini noma ukunamathela.
6. Cindezela ingaphezulu nge-screwdriver esinezicucu ukuze ubone umphumela wokuqina nokuqina komthelela.
"Isitezi se-SPC" kubhekiswa kuphansi elenziwe ngezinto ze-SPC. Ngokuqondile, i-SPC kanye ne-resin yayo ye-copolymer isetshenziswa njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko, izinto zokugcwalisa, ama-plasticizers, ama-stabilizers, ama-colorants nezinye izinto ezisizayo ezifakiwe, ezikhiqizwa kushidi okuqhubekayo ngenqubo yokumboza noma ngenqubo ye-calendering, extrusion noma extrusion.
Iphansi le-SPC wuhlobo olusha oludumile kakhulu lwezinto zokuhlobisa ezingasindi emhlabeni, ezaziwa nangokuthi "iphansi elingasindi". Kungumkhiqizo odumile eJapan naseNingizimu Korea eYurophu, eMelika nase-Asia. Iyathandwa phesheya kwezilwandle futhi isetshenziswa kabanzi, njengemindeni yangaphakathi, izibhedlela, izikole, izakhiwo zamahhovisi, amafektri, izindawo zomphakathi, izitolo ezinkulu, amabhizinisi, izinkundla zezemidlalo nezinye izindawo.
Ubukhulu Sekukonke 5mm
Ukucaciswa kosayizi 1210 * 183 * 5mm
Langaphambilini Isitezi se-SPC 502
Olandelayo: Isitezi se-SPC 1901
Isitezi se-SPC 507
Isitezi se-SPC 505
Isitezi se-SPC 506
Isitezi se-SPC 502